Lufthansa dia mamerina ny sidina amerikana avaratra sy aziatika Premium avy any amin'ny seranam-piaramanidina Munich
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Alemana » Lufthansa dia mamerina ny sidina amerikana avaratra sy aziatika Premium avy any amin'ny seranam-piaramanidina Munich
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • fampiasam-bola • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Rehefa miverina amin'ny ambaratongam-pahavitrihana taloha ny indostrian'ny fizahan-tany dia manamafy ny serivisy premium avy any amin'ny seranam-piaramanidina Munich i Lufthansa ary hanolotra kilasy voalohany amin'ny zotram-pifidianana.
Lufthansa dia mamelona indray Airbus A340-600 dimy manolotra Kilasy Voalohany.
Lufthansa Airbus A350-900s hanolotra Kilasy Voalohany hatramin'ny fahavaratra 2023.
Manomboka amin'ny fahavaratra 2022, ny A340-600 dia hisidina avy any Munich voalohany ka hatrany amin'ny toerana avaratr'i Amerika Avaratra sy Azia.
Ny seranam-piaramanidina Munich no hany ivon-kintana misy kintana 5 an'i Eoropa nandritra ny taona maro ary malaza amin'ny mpandeha Lufthansa, manerantany, tsy ho vavahady mankamin'ny Bavaria fotsiny, fa toy ny seranam-piaramanidina voalohany sy manolotra seranam-piaramanidina manentana.
Ankehitriny rehefa miverina amin'ny ambaratongan'ny hetsika teo aloha ny indostrian'ny fizahan-tany, Lufthansa dia manamafy ny serivisy premium avy any Seranam-piaramanidina Munich ary hanolotra kilasy voalohany amin'ny làlana voafantina indray. Midika izany fa i Lufthansa dia mamerina mihetsika vetivety ny fiaramanidina Airbus maharitra A340-600 miisa efatra misy kilasy sidina efatra, ao anatin'izany ny kilasy voalohany nahazo loka voalohany misy toerana valo.
Manomboka amin'ny fahavaratra 2022, ny A340-600 dia hisidina avy any Munich voalohany ka hatrany amin'ny toerana avaratr'i Amerika Avaratra sy Azia. Ny fanapahan-kevitra hamerenana ireo fiaramanidina ireo dia noho ny fangatahana premium mihombo, ho an'ny orinasa ary koa ny fitsangatsanganana.
Amin'ny faramparan'ny fahavaratra 2023, ny Airbus A350-900 voalohany, manolotra ny Kilasy Voalohany, dia hiditra ao amin'ny andian-tsambo ary hiainga avy any Munich, manamafy ny tolotra premium ao amin'ny foiben'ny kintana 5 an'i Lufthansa.
Talohan'ny nanombohan'ny areti-mifindra, ny fiaramanidina Lufthansa Airbus A340-600 dia nahitana fiaramanidina 17, ny 12 amin'izy ireo dia eo am-pamarotana. Fiaramanidina dimy fanampiny no mbola tsy amidy ankehitriny ary havaozina vetivety ary hamidy amin'ny andro manaraka.
Lufthansa dia manohy mampiasa vola amin'ny fanavaozana ny andian-tsambony. Tamin'ny volana Mey lasa teo, nividy fiaramanidina lava fanampiny 10 an'ny haitao farany ny Vondrona: Boeing 787-900 dimy ary A350-900 dimy. Ireo voalohany dia hiasa amin'ity ririnina ity. Amin'ity taona ity fotsiny, i Lufthansa dia mandray entana isam-bolana amin'ny fiaramanidina Airbus vaovao mahomby solika avy amin'ny fianakaviana A320neo. Fanaterana ny fiaramanidina Airbus A107neo 320additional dia kasaina hatramin'ny 2027.